Pensily telo amby dimam-polo: Stylus tsara indrindra ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Pensily telo amby dimapolo: Stylus iPad tsara indrindra
Rehefa nampiditra ny iPad i Steve Jobs dia nilaza izany izy afaka nanadino sahady isika of the pensilihazo amin'ireto karazana fitaovana ireto. Tsy nanakana ny indostrian'ny accessories tsy hamorona modely samihafa hampiasaina amin'ny iPad izany.
Telo amby dimampolo ny orinasa namoaka ny fangatahana taratasy tao amin'ny App Store tamin'ny 2012, fampiharana voafidy ny taona ao anatin'ny sokajy misy azy, efa niasa tamin'ny famolavolana ny stylus ho azy ireo nandritra ny fotoana elaela. Tamin'ny volana lasa teo dia napetraka tao amin'ny FCC ilay fitaovana. Ity penina Bluetooth ity dia azo amidy amin'ny $ 60.
Araka ny filazan'ny orinasa:
Fitaovana lehibe manentana ny hevitra lehibe. Ny pensilihazo no fitaovana voajanahary indrindra hahazoana hevitra amin'ny taratasy. Mandroso ny teknolojia. Ny stylus dia manana endrika tsara tarehy mitazona ny fikorianan'ny fanoratana na ny fanaovana sary tsy misy fatiantoka, tsy miova fitaovana. Apetrakay eo am-pelatananao ny famoronana.
Ny penina dia miasa amin'ny app Paper ho an'ny iPad ary mifandray amin'ny app amin'ny alàlan'ny Bluetooth 4.0 LE, noho izany tena kely dia kely ny fanjifana. Ny modely bateria dia nesorina tao anatiny ho an'ny famahanana amin'ny alàlan'ny port USB.
Ilay fitaovana maka tahaka ny endrik'ilay pensilihazo mpandrafitra nentim-paharazana. Izy io dia vita amin'ny hazo walnut avy amin'ny ala maharitra (tsara ho fantatra hatrany). Izy io dia manana karazany hafa amin'ny aliminiôna miloko grafita. Tsy mila fanitsiana na fananganana hafa ankoatry ny fampifangaroana azy amin'ny iDevice.
ihany koa azo ampiasaina raha tsy manana bateria ianao, saingy asa lehibe maromaro no ho kilemaina toy ny fanariana ny tohana tanana rehefa manao sary.
Araka ny hitanao amin'ny sary, ny penina dia misy tendron-tsoratra ary iray hafa izay azo ampiasaina ho famafana. Miaraka amin'ny penina dia misy borosy fanampiny (tafiditra ao anaty app) izay azo vidiana tsirairay amin'ny $ 1,99.
Fanazavana fanampiny - Famerenana ny InTuos Creative Stylus nataon'i Wacom, pensilihazo nomerika ho an'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Pensily telo amby dimapolo: Stylus iPad tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao dia tsy mivarotra amin'i Espana izy ireo.
Samsung dia manandrana mangina ny mpanjifa rehefa mirehitra ny Galaxy S4
Tutorial: Ahoana ny fomba hanakanana ny pejy ao amin'ny Safari